I-iPad entsha yango-2019 evela ku-Apple ibizwa ngokuthi: i-iPad Air ne-iPad mini | Izindaba zamagajethi
Ama-iPads amasha ka-Apple ka-2019 abizwa nge: iPad Air ne-iPad mini
Imvamisa i-Apple vuselela amadivayisi ayingxenye yohlu lwe-iPad kabili ngonyaka. Okokuqala ngoMashi, lapho i-iPad eyisisekelo ivuselelwa khona, ukuyibiza ngandlela thile futhi ngokuhamba kwesikhathi ngo-Okthoba, inyanga ebekelwe ukwethulwa kwebanga le-iPad Pro. Kodwa-ke, kubonakala sengathi kulo nyaka kuzoba nesethulo esisodwa kuphela.
Abafana abavela eCupertino bavuselele iwebhusayithi ngokukhulisa ibanga le-iPad, bevuselela ezinye zezinhlobo ebezivele zikhona nokuqeda ezinye. Intsha enkulu itholakala kumodeli entsha, i-iPad Air, i-iPad ehlala maphakathi no-11-inch iPad Pro ne-2018 iPad.
Kepha i-iPad Air akuyona ukuphela kwensiza evuselelwe ngemuva kokuvuselelwa kokugcina kwewebhusayithi ye-Apple, kusukela I-iPad mini nayo ithole ithuba, okungaba ngeyokugcina, ukuvuselela zonke izinto zayo zangaphakathi nokungeza ukuhambisana ne-Apple Pencil.
Ngokufika kwe-iPad Air, I-Apple isuse i-10,5-inch iPad Pro kukhathalogi yayo, i-iPad yokuqala encane ukungena emakethe ngo-Okthoba 2017 futhi iqhubeke nokuthengiswa njenge-iPad yesabelomali ku-Pro range. Ukugcina i-10,5-inch iPad Pro akuzange kube nomqondo, njengoba i-iPad Air entsha ingaphezulu kakhulu inamandla, futhi ishibhile.
Enye i-iPad nayo eyenzekile esitolo sakwa-Apple yi-iPad mini 4, i-iPad endala kunazo zonke i-Apple elokhu ithengisa nokuthi ibingakaze ibuyekezwe cishe iminyaka engu-4, le modeli iyinketho enconywe okungenani ekuthengeni kwayo kokubili izinzuzo nentengo.
1.1 Idizayini yokulondoloza
1.2 Isigaba sezithombe
1.3 Izintengo ze-iPad Air entsha
2.2 Idizayini okufanele ngabe yathuthuka
2.3 Izintengo ze-iPad mini
3 Manje yonke i-iPad iyahambisana ne-Apple Pencil
IPad Air entsha iyi ephethwe yi-A12 Bionic, iprosesa efanayo esingayithola ebangeni le-iPhone 2018, okungukuthi, i-iPhone XS, i-iPhone XS Max ne-iPhone XR, ngakho-ke sizoba ne-iPad iminyaka eminingi. Ngaphezu kwalokho, ngokuya nge-RAM, sithola ukuthi ifinyelela kanjani ku-3 GB, inani elifanayo nesilithola ku-iPhone XR, i-GB eyodwa engaphansi kwaleyo yezinhlobo ze-iPhone XS ne-iPhone XS Max.
Ama-iPhone Xs, ama-iPhone Xs Max ne-iPhone Xr, konke mayelana namadivayisi we-Apple amasha
Iprosesa ye-A12 Bionic, isivumela ukuhlela amavidiyo ngekhwalithi ye-4k ngaphandle kokuphazamisa, jabulela ukungathandwa kwabathelisi esikubona, ukuklama amamodeli we-3D kanye nokusebenzisa izinhlelo ezihlukene ndawonye ngenxa yomsebenzi we-Split View, ngaphandle kokusebenzisa ibhethri ledivayisi yethu nganoma yisiphi isikhathi.
Isikrini sifinyelela kuma-intshi ayi-10,5 futhi siyahambisana ne-Apple Pencil, izesekeli okufanele sizithenge ngokuzimela. Isikrini sihambisana nobuchwepheshe be-True Tone, esivumela ukuthi sijabulele okuqukethwe okukhonjiswa esikrinini kunoma yisiphi isimo, kungaba olwandle noma ngamakhandlela.
Idizayini ye-iPad Air entsha iyefana naleyo etholakala ku-10,5-inch iPad Pro, imodeli enamafreyimu ancishisiwe, izinhlangothi zombili nangaphansi nangaphezulu kuqhathaniswa nemodeli engu-9,7-intshi. Ubukhulu bayo bungu-61 mm futhi bunesisindo esingaphansi kwama-gramu angama-500.
Ukuvikela i-iPad, i-Apple ayihlanganisanga ubuchwepheshe be-Face ID, obekungasho ukwanda kwentengo, futhi okwamanje kuyaqhubeka nokuthembela kunzwa yezigxivizo zeminwe kunkinobho yasekhaya
Yize kuya ngokuya kujwayelekile ukubona ukuthi bangaki abasebenzisa i-iPad lapho behamba ukugcina inkumbulo, abafana be I-Apple kubonakala sengathi abanakanga ngokwanele lesi sigaba ku-iPad Air. Ikhamera engemuva isinikeza isixazululo se-8 mpx ngenkathi ngaphambili, ngama-selfies noma amakholi wevidiyo afinyelela ku-7 mpx.
Izintengo ze-iPad Air entsha
Njengoba ngishilo ngenhla, le iPad entsha iphakathi nendawo kwe-11-inch iPad Pro ne-iPad 2018, zombili ngokusebenza nentengo. Intengo ye- inguqulo eshibhile ye-iPad Air ingama-euro angama-549 yenguqulo engu-64 GB enokuxhumeka kwe-Wi-Fi.
I-iPad Air 64 GB i-Wi-Fi: ama-euro angama-549
I-iPad Air 256 GB i-Wi-Fi: ama-euro angama-719
I-iPad Air 64 GB i-Wi-Fi + LTE: ama-euro angama-689
I-iPad Air 256 GB i-Wi-Fi + LTE: ama-euro angama-859
Eziningi kube ngamahlebezi azungeze ukuvuselelwa kwe-mini mini noma ukuqedwa ngokuphelele kwekhathalogi ye-Apple. I-iPad mini se beyisetshenziswa esidala Ngenani eliphakeme kakhulu kunezinzuzo elisinikeze lona.
Abafana baseCupertino babonakala banikeze le divayisi ithuba lokugcina engeza iprosesa enamandla kunazo zonke inkampani enayo njengamanje, ngaphandle kokuba nenguqulo ye-iPad Pro ngaphezu kokungeza ukuhambisana ne-Apple Pencil.
Lapho kuvuselelwa i-iPad mini, uma i-Apple ifuna ukuqhubeka nokugcina lo sayizi wesikrini kububanzi be-iPad, bekufanele ivuselele iprosesa ngokungeza i-A12 Bionic, iprosesa efanayo esingayithola ebangeni le-iPhone 2018, leyo yi-iPhone XS, i-iPhone XS Max ne-iPhone XR.
I-iPhone XS Max ne-Samsung Galaxy S9 ubuso nobuso, yikuphi okungcono? [IVIDIYO]
Ukwenza ukuphathwa kweprosesa kube bushelelezi ngangokunokwenzeka, imemori yedivayisi yi-3GB, inani elifanayo lememori esingalithola kokubili ku-iPad Air naku-iPhone XR, kube yi-GB eyodwa engaphansi kwalokho esingakuthola kuzo zombili i-iPad Pro ne-iPhone XS ne-iPhone XS Max.
Ukuhambisana ne-Apple Pencil ehambisana nosayizi wayo, kwenza idivayisi yakho incwajana ekahle Ukuhlala nathi njalo, ngoba ngesandla esisodwa singayibamba ngenkathi ngesinye sisebenzisa i-Apple Pencil, kungaba ukudweba, ukubhala, ukwenza i-doodle ...
Idizayini okufanele ngabe yathuthuka
Esigabeni esedlule, ngishilo ukuthi ukuvuselelwa kwe-mini mini kubonakala kuyithuba lokugcina i-Apple elinikeza le modeli, ngoba njengoba sibona ezithombeni zalesi sizukulwane esisha, ukwakheka kuyefana nazo zonke izizukulwane zangaphambilini ze-iPad mini, ngohlangothi oluphanayo kakhulu, imiphetho ephezulu neyaphansi.
Uma sibheka ukuthi i-iPhone XS Max inosayizi wesikrini esingu-6,5-intshi kanye ne-Mini Mini ye-7,9-intshi, eyokugcina iphindwe kabili ubukhulu be-iPhone XS Max. Vele, umehluko wentengo phakathi kwalaba bobabili awusizi, ngaphezu kwe I-iPhone ayihambisani ne-Apple Pencil.
Izintengo ze-iPad mini
Faka ubuchwepheshe besimanje ngaphakathi kwe-iPad mini ngaphezu kokunikeza ukuhambisana ne-Apple Pencil, ithwala ukwanda kwentengo.
I-iPad mini 64 GB i-Wi-Fi: ama-euro angama-449
I-iPad mini 256 GB i-Wi-Fi: ama-euro angama-619
I-iPad mini 64 GB i-Wi-Fi + LTE: ama-euro angama-549
I-iPad mini 256 GB i-Wi-Fi + LTE: ama-euro angama-759
Manje yonke i-iPad iyahambisana ne-Apple Pencil
Icebo lika-Apple lokulandela libonakala lihloselwe engeza ukuhambisana ne-Apple Pencil, Kusukela ngemuva kokuvuselelwa kokugcina, wonke ama-iPads atholakalayo eziteshini ezisatshalaliswa ezisemthethweni ze-Apple ahambisana ne-Apple Pencil, yize amanye amamodeli engakwazi ukuyisebenzisa ngokugcwele.
Kubukeka sengathi i-Apple ibonile ukuthi kufaka phakathi ukusekelwa kwe-stylus ku-iPad, njengoba i-Samsung ibisenza eminyakeni emithathu edlule, ilungele abasebenzisi, ngoba inweba ububanzi bezinto ezisinikeza zona.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » I-Telephony » Tablets » Ama-iPads amasha ka-Apple ka-2019 abizwa nge: iPad Air ne-iPad mini